"277 वस्तु" भारी ट्यांक अनुभव। "वस्तु 277": वर्णन, विशेषताहरु र रोचक तथ्य
को "चिसो युद्ध" को समयमा सोभियत वैज्ञानिकहरू र ईन्जिनियरहरु जटिल र कहिलेकाहीं विश्वास नलाग्दो चुनौतीहरू समाधान गर्न। त्यो समय मा विकास प्राथमिकता निर्देशनहरू एक सिर्जना र सैन्य उपकरण को सुधार भएको थियो। प्राप्त "सोभियत वर्ष," अझै पनि हाम्रो कल्पना यसको शक्ति, बल, र एउटा लेख संग प्रहार।
तर सबै विकासक्रम कार्यान्वयन र आम उत्पादन हालिदिए छन्। एक दुःखी भाग्य सोभियत प्रोटोटाइप भारी ट्यांक "वस्तु 277" befell। यो श्रृंखला मा मात्र दुई मोडेल जारी भएको थियो, तर एक यो दिन survives। तर पनि रेखाचित्रमा, यो "फलाम विशाल" डर बनाउँछ।
भारी ट्यांक को एक नयाँ पुस्ता को विकास Leningrad Kirov कारखाना डिजाइन ब्यूरो मा 1955 मा शुरू भयो। परियोजना प्रमुख इन्जिनियर Kotin Zhozef Yakovlevich द्वारा लाग्यौं थियो। केही रिपोर्ट अनुसार, सबै काम बाहिर एक प्रतिस्पर्धी आधारमा हुनत यो सार्वजनिक विज्ञापन कहिल्यै गरियो।
डिजाइनर को खाता मा सैन्य विकासक्रम धेरै छ। यो आत्म-चालित तोप आधारित HF ट्यांक 1 र आईपी Isu-152, Isu-122, SU-152, साथै चिरपरिचित छ-4 भारी अस्थायी ट्यांक पीटी-76 BTR-50 र APC-पी। तर आफ्नो मुख्य उपलब्धि टि-10 थियो, जो को प्रतिस्थापन नयाँ "277 वस्तु" आउनेछ।
डीजल इन्जिन र ग्यास कल पावर प्लान्ट ( "आपत्ति 278") - सुरुदेखि, हामी उपकरण को दुई प्रकार विकास गरे। दुवै प्रोटोटाइप 1957 मा विधानसभा लाइन बन्द शुरू गरियो।
केही महिना भित्र, तिनीहरूले क्षेत्र परीक्षण र CPSU ख्रुश्चेव को पहिलो सचिव गर्न ल्याए। तर परम्परागत गोलीबारी प्रणाली को एक staunch प्रतिद्वन्द्वीको थियो, भारी ट्यांक को नयाँ मोडेल मूल्यांकन गरेनन्। यो 1960 द्वारा सबै विकासक्रम को समाप्ति कारण थियो।
नयाँ ट्यांक - नयाँ आवश्यकताहरू
संसारको राजनीतिक रंगशालामा, मुश्किल "शीत युद्ध" मा कठिन अवस्था ईन्जिनियरहरु द्वारा माग सैन्य उपकरण र हतियार को मौलिक नयाँ प्रकार सिर्जना गर्नुहोस्। "वस्तु 277" - ट्यांक को एक नयाँ पुस्ता विशिष्ट आवश्यकताहरु सरकार द्वारा अगाडि राख्न भेट्न थियो:
कुल वजन - 55-52 टन भित्र।
हतियार को आधार rifled गर्न बन्दूक कैलिबर 130 थियो।
प्रारम्भिक projectile गति - छैन 1000 भन्दा कम m / s।
इन्जिन शक्ति - 1000 HP।
नयाँ मिसिन को आधार भारी ट्यांक थिए टी-10 र छ-7, पहिले नै राम्रो हुनेछ आफूलाई साबित गरेको छ जो। सायद यो वास्तवमा एउटा नयाँ उदाहरण सन्तुष्ट ख्रुश्चेव छैन भन्ने तथ्यलाई गर्न नेतृत्व गरेको छ छ - "। रक्षक" देश आवश्यक एक मौलिक नयाँ
भारी इस्पात ट्यांक एकाइहरु र आयोग7र टी-10 को एकाइहरूको आधार निर्माण। नयाँ मिसिन एक क्लासिक लेआउट थियो - इन्जिन र दुई ड्राइभिङ को रियर मा स्थित थिए। अगाडि शरीर भाग पूर्ण डाली गरिएको छ, तर मनका झुकेको इस्पात पानाहरू गरेका थिए।
आफ्नो टावर "वस्तु 277" लगभग पूर्ण आधार मोडेल भन्दा लिइएको छ। यो एक अप्टिकल rangefinder दृष्टि संग सुसज्जित थियो जो अगाडि भाग, मा विस्तार। को लम्बी पिछाडी अवस्थित यंत्रीकृत लोड प्रणाली संग boeukladki। बारूद को संरचना 35 राउंड्स शामिल थिए।
को एक ग्याँस टरबाइन पावर प्लान्ट संग "वस्तु 278" को प्रोटोटाइप यसको डिजेल समकक्ष फरक कुनै छ। तर यो आफैले हेर्न र बुझ्न, यो वास्तवमा, हामी fated छन् थिएन गर्न - मोडेल पनि पूरा भएको छैन।
"वस्तु 277" advantageously परीक्षण र सिद्ध घटक र सम्मेलन को समकालीन उपस्थिति देखि प्रतिष्ठित। यो पहिलो सचिव एक विधिपूर्वक थिएन भने, भारी ट्यांक सैन्य उपकरण को सबै भन्दा विश्वसनीय र शक्तिशाली प्रतिनिधिहरूलाई एक बन्न थियो। त्यतिबेला आफ्नो प्रदर्शन एकदम प्रभावशाली थियो:
कम्ब्याट वजन - 55 टन;
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) - 6990 X 3380 X 2292 मिमी;
बन्दूक संग ट्यांक लम्बाइ - 11 मिटर 78 सेमी;
जमीन अवकास - 435 मिमी;
इन्जिन - एम-850;
राजमार्ग मा अधिकतम गति - छैन 55 भन्दा बढी मी / घन्टा;
शक्ति आरक्षित (Refilling बिना ड्राइभिङ) - 300 मी;
युद्घ सामांग्री - 130mm rifled बन्दूक एम-65।
कार चार एक चालक दल थियो ड्राइभ। ट्यांक platoon को संभाव्यतः भाग कमान्डर, चालक, गनर र लोडर प्रविष्ट गर्न थिए।
भारी ट्यांक हतियार समय को आवश्यकताहरू पूरा। 122 मिमी बन्दूक - यो सजिलै डी-25T देखि बन्द दायरा एक शट सामना गर्न सक्छन्। रकेट-चालित grenades साथ सशस्त्र गर्दा 76-122 मिमी को संरक्षण र सञ्चितिको projectiles कैलिबर मार्फत तोड्न होइन, र खडा। "वस्तु 277" कारण यसको शरीर को डिजाइन गर्न ट्यांक र howitzer बन्दुक त प्रभावशाली प्रतिरोध थियो। उहाँले कास्ट को अगाडि भागमा वेल्डेड थियो। यो पक्ष चल प्रोफाइल सेट झुकेको धातु पानाहरू थिए। आरक्षण frontal शरीर भाग 140 मिमी / डिग्री थियो, र मनका - 153 मिमी / डिग्री। यसको frontal हतियार मा कास्ट इस्पात टावर अक्सर 290 मिमी / डिग्री मा स्थित छ।
आधार ट्यांक युद्घ सामांग्री 125 मिमी वस्तु "277" भन्दा कुनै कम दुःखी भाग्य संग rifled बन्दूक एम-65 थियो। अब एक सार्वजनिक कम्पनी "MZ" - यसको विकास बोट №172 को डिजाइन ब्यूरो मा यू Tsirulnikova निर्देशन अन्तर्गत (भारी ट्यांक साथ सँगै) 1955 मा सुरु भयो।
जुन 1956 मा, हतियार को नयाँ प्रकार को पहिलो परीक्षण। यस एम-65 को डिजाइन तीन मुख्य तत्व हुन्छन्:
7330 मिमी लामो बैरल र भित्र 1030 m / s थालनी वेग projectile प्रदान गर्दछ;
बेदखलदार कार्य को चालक दल खण्ड को अत्यधिक ग्याँस सामग्री जोगिन गर्न खन्नु पर्ज समारोह;
थूथन ब्रेक कम्पेसाटर - कारण पाउडर ग्याँसहरु को गतिज ऊर्जा असर कम।
को लोड प्रक्रिया अनुभव भारी ट्यांक "वस्तु 277" (सोभियत संघ) एक विद्युत उपकरण संग यंत्रीकृत लडाई प्याक स्थापित भएको थियो सुविधा पठाइएको गरिनेछ। लक्षित मा बन्दूक इशारा लागि दुई हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरु भेटे। यसरी बाँकी तत्व भूमिका gidrostopora प्ले, र सही - को ठाडो विमान मा stabilizer।
बन्दूक डिजाइन 1961 मा परियोजना "वस्तु 277" को समापन पछि रोकिएको थियो। एक परिमार्जन बाहिर यी बन्दुक मात्र 10 प्रतिहरू उत्पादन थिए, साथै। साफ बन्दूक एम-65 जीएल महत्वपूर्ण मतभेद छ होइन र त्यसै वर्ष उत्पादन बाहिर लगियो।
इन्जिन, प्रसारण र चेसिस
स्तरवृद्धि डिजेल इन्जिन वी-2 इन्जिन वा समुद्री एम-850 - एक भारी ट्यांक मा पावर प्लान्ट इन्जिन को एक दुई प्रकार प्रयोग गर्न योजना छ रूपमा। डिजाइनर Kotin सबैभन्दा शक्तिशाली र विश्वसनीय रूपमा दोस्रो विकल्प निर्णय गरे। यो Leningrad म बोट मा बनेको र समय मा एक प्रभावशाली शक्ति छ थियो - 1,000 भन्दा बढी अश्वशक्ति।
अनुभवी भारी ट्यांक - "277 वस्तुहरू" - मोटर को अनुदैर्ध्य अक्ष गर्न समानान्तर राख्नुभयो। दुवै पक्षले यो बेदखलदार ठंडा सिस्टम घेरिएको थियो, र एक अन्तर्गत तेल र डिजेल इन्धन संग ट्यांक थियो। इन्जिन राखिएको थियो पछि ट्रान्समिसन 8 चरणमा संग ग्रह मार्गदर्शन गियरबक्सलाई प्रस्तुत। यो पनि हाइड्रोलिक नियन्त्रण संग स्टीयरिंग गियर एकीकृत गरिएको छ।
वस्तु "277" प्रयोग भएको थियो मा कमला प्रस्तावक एक धातु बन्द कब्जा संग।4र 8 समर्थन गर्ने समर्थन रोलर मा पङ्क्तिबद्ध दुवै पक्षले। symmetrically disposed एक torsion निलम्बन हाइड्रोलिक dampers belonged नोड्स। यो सबै कार एक चिल्लो सवारी र उच्च यातायात endows।
वस्तु "277" स्थापना गरिएको थियो विरोधी-आणविक रक्षा प्रणाली मा भारी ट्यांक को इतिहास मा पहिलो पटक। के ठीक यो छ, केही लागि ज्ञात छैन। यसबाहेक, termodymovye उपकरण सफाई उपकरण अनुगमन प्रक्रियाको डूब ट्यांक नियन्त्रणमा लागि लड कक्ष मा स्थापित, साथै उपकरण थिए।
संचार को एक आधारभूत माध्यम प्रदर्शन रूपमा रेडियो आर-113 (विशेष गरी ट्यांक लागि) विशेष आदेश द्वारा डिजाइन "गारनेट", र 1953 साल मा प्रकाश जारी। यो नै आवृत्ति दायरामा त, समान प्रकारको रेडियो संग एक अटुट दुई-तरिका संचार प्रदान गर्दछ।
आधुनिक संसारको कार्यान्वयन
": ट्यांक मैदान Var" अनुभव भारी ट्यांक एकदम लोकप्रिय पीसी अनलाइन खेल कार्यान्वयन भएको थियो। "वस्तु 277" तुरुन्तै खेलाडीहरूलाई मनपराएका र हल र turret को राम्रो पुस्तक frontal भाग लागि लोकप्रियता जित्यो। खेलाडीहरू पनि उच्च maneuverability र गति, सैन्य उपकरण को यो वर्ग देखि सामान्यतया आशा छैन जो ध्यान दिनुहोस् हुनेछ।
अर्को लोकप्रिय बहु खेल ट्यांक "सुविधा" को संसार हैंगर ठाउँ दिइएको छैन। जाहिर छ, विकासकर्तालाई एक "कुनै टेम्पलेट" भारी ट्यांक को कार्यान्वयन यसको प्रयासमा ध्यान केन्द्रित गर्न निर्णय र supertesta समयमा "Ob.777 द्वितीय" यसलाई प्रतिस्थापित। तथापि, भविष्यमा, प्रशंसक कार्य मा "वस्तु 277" हेर्न सक्षम हुनेछ भन्ने आशा अझै पनि रहनेछ।
सिक्न र खेल को सबै भन्दा सही प्रतिलिपि मा खेल रमाइलो गर्न चाहनेहरूको ती, यो ट्यांक को विश्व उचित परिवर्तन को लागि प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। भारी ट्यांक "वस्तु 277" जमीन युद्ध ट्यांक नजिक अवस्थित प्रोटोटाइप यद्यपि मा सैन्य उपकरण को connoisseurs खुसी पार्न सक्षम हुने छैन।
अप्टिकल केबल: बेफाइदा भन्दा फाइदा
माछा प्रशोधनका लागि पसल: उपकरण, प्रविधि
Pitting जंग: गराउँछ। जंग तरिका विरुद्ध धातु रक्षा
लहर पावर: सञ्चालन
औद्योगिक वेंटिलेशन: सुविधाहरू, विकल्प र सेटिङहरू समीक्षा
बाल्कन को सुन्दरता। यस श्रापित पहाड कहाँ हो?
स्वादिष्ट सलाद: मेयोनेज बिना व्यञ्जनहरु। बरु धेरै सस
चयनकर्ता: यो छ जो तिनीहरूले के गर्छन्?
एक पेट अल्सर संग भोजन।
EPN.bz: ग्राहक समीक्षा
मिरर कार्प मछुआरे र खानेकुराहरूको मनपर्छ
पुरुष Eau डे लुभाना Homme खेल Chanel। समीक्षा, स्वाद विवरण र प्रकार
देवी हथेर सबै जीवित चीजहरु को आमा हो।